Wednesday, October 6, 2010 Sunday, October 4, 2015 Matt Chandler kwuru
Nkesa afọ na Social Network saịtị
N’ọnwa a ka amalitere m ịkụziri kọleji na Web Marketing na Artlọ ihe osise nke Indianapolis. Imirikiti ụmụ akwụkwọ 15 nọ na klas m na-abịarute ngụsị akwụkwọ na imepụta ejiji na azụmaahịa azụmaahịa, achọrọ ha usoro m.
N'ezie, n'abalị mbụ mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ batara na kọmpụta kọmputa wee nọdụ ala, ndị isi họpụtara onwe ha kpamkpam: ụmụ akwụkwọ 10 m na-eji ejiji na aka nri m, ebe nrụọrụ weebụ m ise na ụmụ akwụkwọ na-ese ihe osise na aka ekpe m. Adị m ka agba egwu nke obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke ndị a kụrụ n'akụkụ mgbidi, akụkụ nke ọ bụla na-ele ibe ya anya.
Ka m na-agafe usoro ihe omume na usoro mmeghe, usoro mgbasa ozi na-ekere òkè dị ukwuu. Achọpụtara m na ụmụ akwụkwọ ahụ ga-anọ na ya niile, ọtụtụ n’ime ha abatala ụlọ nyocha n’oge iji lelee email na Facebook. Ma enwere m ihe ijuanya.
Ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke klas m emetụbeghị ma ọ bụ lelee Twitter. Ọtụtụ n’ime ndị ahụ amadịghị ihe ọ bụ na ihe ọ bụ maka. Naanị otu n'ime ha blogged, na otu onye nwere ha onwe ha na ebe nrụọrụ weebụ.
Ikpoko Hits Ft
Chere, ị pụtara ịgwa m na ọtụtụ ndị nwere waya, njikọta, na ọgbọ niile anaghị eji ngwa ọrụ ịkparịta ụka n'socialntanet? Ndi mgbasa ozi na-eme akụkọ ifo na ụgha? Enwere m ndu nke ukwuu na obere ụwa m nke na elegharaghị m otu akụkụ nke ndị bi na ya anya?
Otu n'ime ụmụ akwụkwọ m hụrụ ihe ijuanya m, zara, "Oh, Ahụla m na Facebook: 'ezitere site na Twitter.' Amaghị m na ọ bụ ihe ọ bụ. ”
Ọ dị mma, n'ihi ya, m na-egwu egwu m maka mmetụta ọchị. Amaara m nke ọma na nnabata nke ngwaọrụ dị iche iche na ọwa dị iche na, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọgbọ. Amaara m na Twitter nwetara uru na mgbasa ozi n'etiti ndị okenye. Ma ọ tụrụ m n'anya na ole n'ime iri abụọ na iteghete a na-amaghịdị ihe Twitter bụ.
Ka Anyị Mee Math
Nke a kpaliri m ịlaghachi ma lelee nyocha ọhụụ na-adịbeghị anya gbasara nkesa ntanetị na ntanetị. Na February 2010, na-eji data sitere na Google Ad Planner, Royal pingdom gosiri na gafee ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'socialntanet 19 kachasị ewu ewu, ụmụaka dị afọ 18-24 zara naanị 9% nke ndị ọrụ. N'ihe banyere Twitter, otu a gụrụ ihe na-erughị 10%, yana 64% nke ndị ọrụ Twitter bụ afọ 35 ma ọ bụ karịa.
Na mkpokọta, ndị afọ 35-44 na 45-54 na-achịkwa saịtị ịkparịta ụka n'socialntanet, na-anọchite anya ndị ọrụ 74% jikọtara. N'ụzọ na-akpali mmasị, ndị agadi 0-17 (kọmputa ndị ọrụ afọ iri na ụma?) Akaụntụ 21%, na-eme ka ha bụrụ ndị ọrụ kachasị ọrụ nke abụọ.
Ka anyị gaa n’ihu n’otu ụzọ n’ụzọ anọ rue Mee 2010 yana ọmụmụ ihe nke Edison Research kpọrọ “Twitter Usage In America: 2010.” Dị ka nyocha ha si kwuo, ụmụ afọ 18-24 mejupụtara 11% nke ndị ọrụ Twitter kwa ọnwa. Na mkpokọta 52%, ndị otu 25-34 na 35-44 ka na-achịkwa.
Ugbu a, enwere nnukwu mgbakọ na mwepụ dị iche n'etiti ndị mmadụ agbata ebe a: ụmụ afọ 18-24 dị afọ asaa karịa afọ 10 nke ndị ọzọ niile. Yabụ na enwere oke maka ịmegharị ọnụọgụ ndị dabere na mmebi a, mana ejiri m n'aka na ọ niile na-asacha.
Kedu ihe kpatara na ha anọghị n'ụgbọ?
Ọ bụrụ na m kwenyere nkuzi m nke mbụ nke ọkara afọ agụmakwụkwọ ahụ, isi ntinye maka ịzụ ahịa weebụ bụ na ọdịnaya gị ga-enye ndị ahịa uru. Dabere na ụmụ akwụkwọ m, imirikiti n'ime ha amaghị onye ọ bụla na-eji Twitter. Ya mere saịtị ahụ na ọrụ ya enweghị uru ọ bụla.
Nke abuo, onye ọ bụla nọ na klas na-enyocha Facebook. Reportedfọdụ kọrọ na-ahụ “site Twitter” verbiage na mmelite ọnọdụ, na-egosi na ụfọdụ ndị enyi ha na-eji Twitter. Nke a gosipụtara nke abụọ nke nkuzi m (yana nnukwu akụkụ nke Udiri ụdị azụmahịa), nke bụ na ọ bụghị ikpo okwu dị mkpa, ọ bụ ọdịnaya. Ha achọghị ịma ebe mmelite ahụ sitere, ha maara naanị na ha nwere ike nweta ha site na ikpo okwu nke nhọrọ ha.
N'ikpeazụ, ma data nyocha dị n'elu na ihe akaebe akụkọ m na-egosi na echiche buru ibu na ụmụ akwụkwọ kọleji na-arụsi ọrụ ike na-eme ihe ndị ọzọ iji nyochaa (ma ọ bụ nyochaa) ọtụtụ saịtị, netwọkụ na nyiwe. Ọtụtụ n'ime ha kọrọ na ha wepụtara oge na-eme ihe ọmụmụ na ịrụ ọrụ nwa oge kama ịgha ụgha na ịntanetị.
Ya mere, Gịnị Ka Anyị Ga-eme?
Dị ka ndị na-ere ahịa n'onlinentanet, anyị aghaghị ịghọta ma nakwere ọdịiche ndị a maka ojiji maka afọ dị iche iche. Anyị ga-eburu ọdịnaya ahụ nye ndị anyị chọrọ iru iji ngwa ọrụ ha na-eji arụ ọrụ. A na-emezu nke a site na nyocha zuru oke na atụmatụ maka atụmatụ ntanetị, yana ịmara ụdị nyiwe iji nyochaa, agafeghị oke na tụọ. Ma ọ bụghị ya, anyị na-atụfu oge, mbọ na ego n'ime ikuku ma nwee olileanya na ndị ahịa ziri ezi ga-ejide.
Tags: afọafọ nkesalaura egburuelekọta mmadụ mediaTwitter
B2B: Vidio na-emetụta Mkpebi chazụta
Ọkt 6, 2010 na 5:25 PM
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, ọkachasị anya gị karịa ọnụọgụgụ. Ọ bụ ezie na omume igwe mmadụ dị obere anaghị abanye na Twitter, ha na-ahụ ọdịnaya otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ka ndị a na-ajụ ihe dị iche iche na-ezukọta, yabụ ọ ka kwesịrị ka ịkwado Twitter maka oge a.
Ọkt 7, 2010 na 8:38 AM
Echetara m nwa m nwoke chịrị m ọchị mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị gbasara ego ole m jiri email. Ugbu a ọ bụ okenye na IUPUI, email bụ ihe dị mkpa na ọ gbanwere ọbụna ama iji debe. Amaghị m na onye ntorobịa na-akpali omume a, echere m na ọ dị mkpa na ọ bụ ya na-eme ya. Twitter dịịrị m mfe ngbari na iyo ozi, ebe Facebook bụ karịa gbasara netwọkụ m na mmekọrịta m. Agaghị eju m anya ma ọ bụrụ na nwa m nwoke 'tweeting' n'ime afọ ole na ole iji kesaa ozi na netwọkụ ya nke ọma.
Ọkt 7, 2010 na 9:53 PM
Nwa nwoke, ị kụrụ akwara! Doug Karr ga-agwa gị na ọ gwala ụfọdụ klas m okwu na IUPUI na ọ nwere ike chefuo etu ha pere mpe! N'eziokwu, ha abụghị ndị doro anya banyere mmadụ mgbasa ozi, kama m na-eji na-elekọta mmadụ media ọtụtụ na m ọmụmụ na m mgbe niile nwere ike ime ka ụmụ akwụkwọ ahụ "ịzụta na" na-elekọta mmadụ media si uru na-amụta na-na onye branding.
Otu n'ime ihe mere m ji hapụ agụmakwụkwọ bụ n'ihi na "ọ dịghị onye na-azụ ihe m ga-ere" ya mere, agafere m ịchọta ọrụ ọzọ ebe ndị folda dị njikere ịme ihe ọhụrụ na nkuzi na mmụta, ahia, ma ọ bụ ihe ọ bụla! Enwere m mmetụta ọjọọ nke nwere ike iwe obere oge, mana enwere m oge na ndidi ichere na ịmụtakwu onwe m ka m na-eche. O :-)
Ọkt 9, 2010 na 10:46 PM
Echere m na ọ bụ naanị anyị. Ọ na-adị m mma ugbu a na amatala na ndị ọzọ na-enwekwa otu ihe ahụ. N'oge ọkọchị, Mahadum Marian kwadoro HobNob 2010, mmemme ịkparịta ụka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke erlọ Ọrụ Azụmaahịa Ukwuu Indianapolis haziri. Mahadum Marian bụ onye nkwado mgbasa ozi. Anyị gbalịrị iwe ụmụ akwụkwọ site na Facebook na e-mail na Tweet tupu, n'oge, na mgbe ihe omume gbanwere maka polo n'efu na ezigbo nri. Ọ rụpụtara nke ọma, mana o siri ike ịkpọ ụmụ akwụkwọ. Ezigbo ihe siri ike. Anyị mechara zụọ ha. Anyị nwere ike ọ gaghị anwa ya ọzọ.
Ọkt 10, 2010 na 10:08 PM
Afọ Iri na onma na Twitter? Naanị ka "cyberstalk celebs". Ajụrụ m!
Ọkt 13, 2010 na 11:51 AM
Ndo maka azịza egbu oge, aria m ọrịa.
Ọ bụ ebe na-adọrọ mmasị. Ndị klas m bụ ịre ahịa weebụ, na 2/3 nke klaasị m bụ nke ndị isi ahịa ahịa azụmaahịa. Agbanyeghị, nsogbu kachasị dị n'ịntanetị bụ nke mba ọzọ, n'agbanyeghị na ha bụ ọgbọ ọgbọ echebere na ha nwere njikọ chiri anya ma na-ere ahịa na enweghị obi ebere.
Hà dị mma na nzacha ozi mgbasa ozi? Ha amaghi uzo eji eme ha? Ma obu na ha adighi eji ngwa oru dika ndi ahia gha ekwenye?
Ekwenyesiri m ike na m ga-enwekwu ihe ị ga-ekwu ka anyị na-aga n'ihu na nkeji iri na ise ma m na-ahọrọ ụbụrụ ha.